သူဌေးမိန်းမသုံးယောက် နှင့် လင်ငယ်အကျဉ်းသားဘဝ - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
လက်ကျန်ငွေကို စစ်ကြည့်ရင်း မြတ်သူ လေပူတစ်ချက်ကို မှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။ ငွေက (၁၅၀၀၀) ခန့်သာ ကျန်တော့သည်။ လကုန်ဖို့ကလည်း (၁၃) ရက်ခန့် လိုနေသေးသည်။ ဒီငွေနဲ့ လကုန်ထိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနေရပါ့။ အခန်းငှားခတွေက ပေးရဦးမည်။ ယခင်လက ကြွေးကျန်ကလည်း ရှိသေးသည်။
နယ်မှာ အလုပ်ရှားသဖြင့် ရန်ကုန်ကို စွန့်စားပြီး လာခဲ့သော သူ့အဖို့ သွင်းကုန်/ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် အလုပ်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ နယ်မှာရှိတော မိခင်ကြီးကလည်း ကျန်းမာရေးက မကောင်း။ ညီမလေး ကျောင်းစရိတ်ကိုလည်း လှမ်းထောက်ပံ့ရသေးသည်။
တစ်နေ့က အမေဖြစ်သူ ဖုန်းဆက်တော့ သူစိတ်မကောင်း။ ညီမလေးက ယခုနှစ် (၁၀) တန်း။ အဖေဖြစ်သူက သူဘွဲ့ရသည့်နှစ်မှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်။ မြတ်သူကား အသက် (၂၃) နှစ်ခန့်ရှိနေပြီ။ အရပ်က ၅ ပေ (၇) လက်မခန့်ရှိပြီး အသားအရေကတော့ မိန်းကလေးအသားအလား ဖွေးဆွတ်နေသည်။ ရုပ်ကလည်းဖြောင့်သည်။ ဖြူဖြူနွဲ့နွဲ့လေးပင်။ မိန်းမတွေကြိုက်သည့် ရုပ်ရည်မျိုး.။
ဒါပေမဲ့ မြတ်သူ ရည်းစားမထားရဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့်အခြေအနေကို ကိုယ်သိနေလို့။ သူ့မှာ စောင့်ရှောက်ရမည့် မိခင်ကြီးနဲ့ ညီမလေး မျက်နှာကို မြင်လိုက်တိုင်း သူလက်တွဲဖော်ရှာဖို့ စိတ်ကူးတွေ ပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ယခု သူစိတ်ပူနေသည်မှာ ညီမလေးက (၁၀) တန်းဆိုတော့ ကျူရှင်ကောင်းကောင်းတော့ ထားမှရမည်။ ခက်တာက သူ့လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံကမရှိ။ ရသည့်လခကလည်း အလုပ်ဝင်စမို့ နည်းနေသေးသည်။
ဒီလမှာ သူနေမကောင်းဖြစ်လိုက်သေးသဖြင့် ဆေးဖိုးဝါးခကလည်း တော်တော်ကုန်သွားသည်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီလ မိခင်ကြီးကို ဘယ်လို ထောက်ပံ့ရမှန်းပင်မသိ။ ငှားထားသည့် အခန်းခတွေ၊ ထမင်းစရိတ်တွေကို တွေးရင်း ရင်မောလာသည်။ သူ့အိပ်ယာဘေးမှာ ချထားသည့် ဆေးလိပ်အကြမ်းကို မီးညှိကာသောက်ရင်း အိပ်ယာပေါ် ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီး အိပ်ပျော်အောင် ကြိုးစားသော်လည်း တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော်။ အားလုံးကို တွေးရင်း ရင်မောနေတာကြောင့် ဖြစ်နေသည်။
သြော်… လောကကြီးကလည်း ချမ်းသာတဲ့သူတွေများ ထားစရာမရှိအောင် ချမ်းသာလိုက်ကြတာ။ တို့လို လူမျိုးတွေများကျတော့လည်း ဆင်းရဲချက်က။ အခုအချိန်မှာ ထီလေးဘာလေး ပေါက်ရင် ကောင်းမှာပဲကွာလို့.. အားငယ်စွာ တွေးနေမိသည်။
ရုံးခန်းထဲသို့ အပြာနုရောင်ဝမ်းဆက် ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ကာ လက်ဝတ်လက်စားတွေ သီးနေအောင် ဝတ်ဆင်လာသော အသက် (၃၅) နှစ်ခန့်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဝင်လာသည်။ အသားက ဖြူဖြူ…. ရုပ်ကလည်း ချောသည်။ မသိလျှင် ကလေးအမေဟုပင် မထင်ရ။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကို စီးထားပြီး ခြေကျင်းဝတ် ဖြူဖြူလေးနှစ်ဖက်တွင် ဝတ်ဆင်ထားသော ရွှေခြေကျင်းမျင်မျင်လေးများ ယမ်းသွားပြီး ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်တိုင်း ခြေဖနောင့်လေးနှစ်ဖက်က သွေးရောင်လေးတွေ ထထသွားသည်။ အငြိမ်းစားနေရသူမှန်း သိသာသည်။
အိစက်ဝိုင်းဝန်းပြီး တင်းရင်းနေသော တင်ပါးနှစ်ဖက်က လှမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း တုန်တုန်ခါခါနှင့်။ ကျောလယ်လောက်ရှိသော ဆံပင်ကို ဖြောင့်စင်းထားပြီး ဖြန့်ထားသည်။ လည်တိုင်ကျော့ကျော့တွင် ဝတ်ဆင်ထားသော ပလက်တီနမ်ဆွဲကြိုးမှ စိန်လော့ကတ်သီးလေးက သူမ၏ မို့မောက်တင်းရင်းနေသော ရင်ညွှန့်နှစ်ခြမ်းအလယ်တွင် ကွက်တိကျနေသည်။
သူမနာမည်က ဒေါ်ကျော့ကျော့ ။ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူဌေး ဦးခင်မောင်တင့်ကတော်။ သူမက မြတ်သူ စားပွဲရှေ့ လာရပ်လိုက်ပြီး…
“ကောင်လေး ကိုကြီးရှိတယ် မဟုတ်လား”
“ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ… ရုံးခန်းထဲမှာ ရှိပါတယ် အစ်မ”
ဒေါ်ကျော့ကျော့က ပြောလိုက်ရင်း ဦးခင်မောင်တင့် ရုံးခန်းဘက်သွားသဖြင့် မြတ်သူလည်း လိုက်သွားပြီး အခန်းတံခါးကို ရိုရိုကျိုးကျိုး ဆွဲဖွင့်ပေးလိုက်သည်။
“ကိုကြီး… ကျော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရှောပင်းထွက်မလို့ (၅) သိန်းလောက်ပေးဦး”
ဦးခင်မောင်တင့်က အံဆွဲကို ဖွင့်လိုက်ပြီး ပိုက်ဆံ (၅) သိန်းကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့က ဦးခင်မောင်တင့် ပါးကို ရွတ်ခနဲ နမ်းလိုက်ပြီး
“အဲ့ဒါကြောင့် ကိုကြီးကို ချစ်ရတာသိလား…”
လို့ပြောလိုက်သည်။ ဦးခင်မောင်တင့် မျက်နှာကြီးကတော့ ပြုံးဖြီးလို့ပင်။ ဝန်ထမ်းတွေကိုသာ မျက်နှာ (၈) ခေါက်ချိုးနှင့် ဆက်ဆံတတ်သော်လည်း မိန်းမ ငယ်ငယ်ချောချောလေးကို ရထားသူပီပီ မိန်းမကိုတော့ မျက်နှာက အချိုကို သကာလောင်းသလိုပင်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့ကတော့ ငွေကိုယူကာ ဦးခင်မောင်တင့်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတော့သည်။ ဦးခင်မောင်တင့်က ဒေါ်ကျော့ကျော့ ထွက်ခွာသွားသည်နှင့်
“ဟိုကောင်.. မနက်က ခိုင်းထားတဲ့ စာရင်းတွေ လုပ်ပြီးပြီလား.။ ပြီးရင် လာတင်တော့”
ဟု လေသံခပ်မာမာဖြင့် ပြောလိုက်သဖြင့်..
“ဟုတ်ဟုတ်.. ပြီးတော့မှာပါ ဆရာ… နည်းနည်းနေရင် လာတင်ပါ့မယ်…”
“အေး ဒါဆိုလည်း မြန်မြန်လုပ်.. သွက်သွက်လက်လက်ကို မရှိဘူး”
လို့ ပြောလိုက်တာကြောင့် မြတ်သူလည်း ကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့ လစ်လာခဲ့ရသည်။ ဟွန်း.. ခုနကမျက်နှာနဲ့များ ကွာပါ့လို့ မကျေမနပ်တွေးတောလိုက်ပါသေးသည်။
“ဆောရီး ကိုအောင်.. ဆောရီး”
စိတ်ကူးမဟုတ်တာကြောင့် စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်တဲ့ မြတ်သူဟာ လှေကားထစ်မှာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တိုက်မိသည်။ သူနဲ့ အခန်းချင်း ကပ်လျက်နေတဲ့ ကိုအောင် ပါ။ အသက်ကတော့ (၂၅) နှစ်လောက် ရှိပြီ။ လူက ဝတ်ပုံစားပုံကတော့ လန်ထွက်နေတာဘဲ။ ဝတ်လိုက်တာကလည်း အကောင်းစားတွေကြီး။ ဘာလုပ်ငန်း လုပ်သလဲတော့ မြတ်သူမသိ။ ကိုအောင်ကတော့ တော်တော်အဆင်ပြေတာကို မြင်ရသည်။ ငွေကလည်း လက်ထဲမှာ အနည်းဆုံး မရှိပါဘူးဆိုလျှင် တစ်သိန်းခန့်ကတော့ ရှိနေတတ်သည်။
“ဘာတွေများ စိတ်ကူးလာလို့လည်း ညီလေး မြတ်သူ..”
ကိုအောင်က ပြုံးပြုံးလေး မြတ်သူကို မေ့လိုက်သည်။
“ဒီလိုပါဘဲ အစ်ကိုရာ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်လို့”
“ဘာတွေများ ဖြစ်နေလို့လဲ ညီလေးရ”
“ငွေရေးကြေးရေးပါ အစ်ကိုရာ.. အစ်ကိုတို့လို အလုပ်အကိုင် ကောင်းရင်လည်း အကောင်းသား”
“မထင်ပါနဲ့ ညီလေးရာ.. မင်းတို့ဘဝပဲ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းပါတယ်။ လာကွာ… မင်းစိတ်မဟုတ်ရင် တစ်ခွက်တစ်ဖလားလောက် သွားချရအောင်.. အစ်ကိုတိုက်ပါ့မယ်”
ကိုအောင်က မြတ်သူကို ဘီယာသောက်ရန် ခေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ မကြာခဏ ဒီလိုပဲ သူတို့လမ်းထိပ်က ဘီယာဆိုင်မှာ မြတ်သူကို လိုက်တိုက်တတ်သည်။ မြတ်သူလည်း စိတ်အနည်းငယ် ညစ်နေသဖြင့် ကိုအောင်ခေါ်ရာနောက်သို့ လိုက်သွားတတ်သည်။ ဘီယာဆိုင်မှာ ဘီယာ (၄) ခွက်လောက် သောက်လိုက်တော့ မြတ်သူ နည်းနည်းမူးလာသည်။
“အလုပ်အကိုင်လေး ကောင်းရင် ပြောစမ်းပါဦး ကိုအောင်ရာ..။ အခုအလုပ်က အဆင်မပြေလို့..”
ကိုအောင်က အနည်းငယ်ထွေပြီ ဖြစ်သဖြင့်…။
“မလုပ်ချင်ပါနဲ့ ညီလေးရာ… ပိုက်ဆံသာရတာ စိတ်မချမ်းသာရဘူးကွ… မင်းတို့အလုပ်ဘဲ ကောင်းတယ်”
“ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုအောင်ရ..။ ဘာအလုပ်များ မို့လို့လဲ..”
“မသိချင်ပါနဲ့ ညီလေးရာ…။ မကောင်းဘူး”
လို့ ပြောလိုက်တာကြောင့် မြတ်သူလည်း ဆက်မမေးရဲတာ့ဘဲ ဘီယာကိုသာ ဆက်လက် သောက်သုံးနေပါတော့သည်။
ဆိုင်ထဲက ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ မှောင်လည်းမှောင်ပြီ မူးလဲမူးနေကြပါပြီ။ သူတို့နေတဲ့ အခန်းတွေကို ရောက်တဲ့အခါမှာတော့
ဆိုပြီး ကိုအောင်က သူ့အခန်းထဲ ဝင်လိုက်သလို မြတ်သူလည်း သူ့အခန်းထဲဝင်ကာ အခန်းတံခါးကို ပိတ်လိုက်ပြီး အိပ်ယာပေါ်ကို မူးမူးနဲ့ ပစ်လှဲချပြီး စိတ်ကို လျှော့လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ခဏအတွင်း အိပ်ပျော်သွားပါတော့သည်။
လေပူတစ်ချက်ကို မှုတ်ထုတ်ရင်း ကိုအောင် အိပ်ယာပေါ် လှဲချလိုက်သည်။ တကယ်တော့ သူ့ကိုယ်သူ ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘဝပေးအခြေအနေအရ သူလုပ်နေရတဲ့ အလုပ်ဟာ ခပ်ရင့်ရင့် ပြောရရင်တော့ ငွေကြေးချမ်းသာပြီး ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူကုံထံ အမျိုးသမီးတွေ အလိုကျ ဖျော်ဖြေရတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူနဲ့ အခန်းချင်း ကပ်ရက်မှာနေတဲ့ မြတ်သူလို ဘဝမျိုးကို သူအရမ်းလိုချင်မိသည်။ ငွေသိပ်မရှိပေမဲ့ ဖြူစင်သန့်ရှင်းတယ်လို့ သူထင်မိသည်။
အရင်ကတော့ ငွေရဖို့နောက် တစ်ခုကိုဘဲ လိုက်မိပေမဲ့ အခုအချိန်မှာ တော်တော်လေး စက်ဆုပ်ရွံရှာလာပြီ။ များသောအားဖြင့်တော့ သူဆက်ဆံရတဲ့ သူတွေဟာ ယောင်္ကျားနဲ့ အလိုမပြည့်တဲ့ သင်္ဘောသား မိန်းမတွေ၊ အရာရှိ ကတော်တွေ၊ သူဌေးမိန်းမတွေဘဲ များသည်။ ခက်တာက သူကရုန်းထွက်ချင်ပေမဲ့ ရုန်းထွက်ဖို့ မလွယ်ကူလှ။ ပညာကလည်း သိပ်မတတ်တဲ့ သူ့အဖို့ ဒီလောကထဲကနေ မထွက်နိုင်အောင် ဖြစ်နေရသည်။
ငှားတဲ့ မိန်းမတွေက သူတို့အလိုကျ စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ပေးနိုင်ရင် ငွေကောင်းကောင်း ပေးတဲ့အတွက် သူဒီအလုပ်ကို ဆက်လုပ်နေရသည်။ ပြောရရင်တော့ ဂုဏ်သိက္ခာကတော့ ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင် ကျဆင်းတာပါ။ များသောအားဖြင့် ငှားတဲ့ မိန်းမတွေအကုန်လုံး နီးနီးရဲ့ အဖုတ်ကို ပါးစပ်နဲ့ကောင်းကောင်း မှုတ်ပေး စုပ်ပေးပြီးမှ ဆက်ဆံခိုင်းတာပါ။ သူမတို့ ငှားရမ်းထားတဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် ယောင်္ကျားတွေ ဖာငှားပြီးချရင် လီးစုပ်ခိုင်းသလိုပဲ မိန်းမတွေကလည်း သူတို့ငှားထားတဲ့ဘဲကို ငွေပေးရတာတန်အောင် သေသေချာချာကို စုပ်ခိုင်းမှုတ်ခိုင်းတာပါ။
လိုးချင်စိတ် အရမ်းပြင်းပြနေတာကြောင့် လီးတောင်နေရင်လည်း စိတ်ကို ထိန်းထားရပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်ထိန်းနိုင်မှုနဲ့ မရပါဘူး။ အတင်းလုပ်ဖို့ ကြိုးစားဖို့တော့ ဝေလာဝေး။ ငှားရမ်းသော မိန်းမအများစုက ဂုဏ်သရေရှိ အသိုင်းအဝိုင်းက သူတွေများတော့ အချိန်မရွေး ထောင်ထဲရောက်အောင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ အနေအထားလဲ ရှိကြတယ်လေ။
သူတော်တော်တော့ စိတ်ကုန်နေပါပြီ။ အိပ်တော့မယ်ဟု စဉ်းစားပြီး ကိုအောင် မီးကို မှိတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာဘဲ သူ့ဖုန်းက message ဝင်လာပါသည်။ massage ကိုဖတ်ကြည့်ပြီး ကိုအောင် ရင်မောစွာ ကုတင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းလိုက်ပါတော့သည်။
အချိန်ကား ည (၉) နာရီခန့် ရှိပါပြီ။ မွေ့ယာပေါ်မှာတော့ ကိုအောင်ဟာ ကိုယ်လုံးတီး ပက်လက်လှန်အနေအထားနဲ့ပါ..။ တရိပ်ရိပ် တက်လာတဲ့ ရမ္မက်သွေးတွေကြောင့် သူ့လီးကလည်း တောင်နေပါပြီ။ အမျိုးသမီးကြီး (၂) ဦးက တစ်ယောက်က သူ့လီးကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွနေပါသည်။
နှစ်ယောက်လုံးကတော့ အသက် (၄၀) ခန့် ရှိပြီး ဝတ်ထားတဲ့ ရွှေတွေကလည်း သီးလို့ပါ။ ရုပ်ကတော့ သာမန်သာရှိပေမဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကတော့ တောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီးတွေပါ။ နှစ်ယောက်လုံးကလည်း ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ကိုအောင်ရဲ့ ဘေးနားမှာ လှဲပြီး ကိုအောင်ကို နူးနေတာပါ။ တစ်ယောက်က ကိုအောင်ရဲ့ နို့သီးသေးသေးလေးကို လက်ညိုးနဲ့ ဖိပြီး ဝိုက်ပြီး ပွတ်ပေးနေပါတယ်။
ကိုအောင်ရဲ့ လိင်တံက (၆) လက်မ ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီး လုံးပတ်ကလည်း ဓါတ်မီးအလတ်လုံးလောက်ကို တုတ်ပါတယ်။ ကိုအောင်ရဲ့ လီးကြီးကို ဆွနေတဲ့ အမျိုးသမီးက ကိုအောင်ရဲ့ လီးကြီးကိုလွန်စွာသဘောကျနေပါတယ်။ ထိုအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ နာမည်က မေသီဝင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်။ နို့ကိုချေပေးနေတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ ခိုင်ချိုမာလို့ သူသိထားပါတယ်။
သူမတို့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ယောင်္ကျားတွေက ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေးတွေပီပီ မယားငယ်တွေယူပြီး အိမ်မကပ်တဲ့အချိန်မှာ သူမတို့ နှစ်ယောက်လုံးကလည်း ကိုအောင်လို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးကို စပွန်ဆာပေးပြီး ကောင်းကောင်းလိုးခိုင်းတာပါ။ အခု သူရောက်နေတာကတော့ ဒေါ်မေသီဝင်း ဝယ်ထားတဲ့ တိုက်ခန်းအသစ်မှာပါ။ တီဗွီမှာတော့ အပြာကားတစ်ကားကို ထိုးပြထားပါတယ်။ သူမတို့က အပြာကား ပြထားပြီး အပြာကားထဲကအတိုင်း လိုးခိုင်းတာပါ။
“ခိုင်ချိုရေ ဒီကမောင်လေး ဒုတ်ကြီးကတော့ တင်းပြည့် ကျပ်ပြည့်ဘဲဟ။ အိမ်က ဘဲနာကြီးဟာနဲ့တော့ ကွာပ.. ဟင်းဟင်း”
“ရလောက်ပြီ ထင်တယ်နော်… တော်တော် တောင်နေပြီ”
မေသီဝင်းက လီးကို ဆွပေးနေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး။
“ကဲ… မောင်လေးရေ မမတို့နှစ်ယောက်ကို ဇာတ်ကားထဲကအတိုင်း နူးပေးတော့”
မေသီဝင်းက ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ပြီး ဒူးကိုထောင်ထားလိုက်သည်။ ကိုအောင်ကား ဒေါ်မေသီဝင်းနှင့် ဒေါ်ခိုင်ချိုမာကို တစ်ချီစီပြီးအောင် မှုတ်ပေးရဦးမှာပါ။ ပြီးမှ သူမတို့ စိတ်ကြိုက် ပုံစံနှင့် လိုးခိုင်းမှာ ဖြစ်သည်။
ကိုအောင်လည်း ဒေါ်မေသီဝင်းရဲ့ ကားထားတဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားထဲကို မျက်နှာကို အပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်မေသီဝင်းရဲ့ စောက်ပတ် ပြဲပြဲအာအာကြီးကို လျှာကိုထုတ်ပြီး အပြားလိုက် ယက်တင်လိုက်ပါတယ်.။
ဒေါ်မေသီဝင်းတစ်ယောက် စောက်ပတ်ထဲမှာ သေးဖြန်းဖြန်း ထွက်ချင်လောက်အောင် ကောင်းသွားတာမို့ ကိုအောင်ရဲ့ ဆံပင်တွေကို ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေပါတယ်။ ဒေါ်ခိုင်ချိုမာကတော့ ဒေါ်မေသီဝင်း ပေါင်ကြားထဲ မျက်နှာအပ်နေတဲ့ ကိုအောင်ရဲ့ လီးကြီးကို နောက်ကနေနှိုက်ပြီး ဆုပ်နယ်နေပါတယ်။
သူဌေးမိန်းမတွေပီပီ စောက်ပတ်ကို အကောင်းစား အမွေးနံ့သာတွေသုံးပြီး ဆေးကြောထားတာကြောင့် ကိုအောင်အဖို့တော့ စောက်ပတ်ယက်ပေးရတာ အခက်အခဲ သိပ်မရှိလှပါ။ ကိုအောင်ဟာ သူ့ရဲ့ လျှာဖျားလေးနဲ့ ဒေါ်မေသီဝင်းရဲ့ စောက်စိကို ကစားပေးတဲ့ အခါမှာတော့ ဒေါ်မေသီဝင်းဟာ….
“အိုး အိုး အင်း အင်း”
ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ ဖင်ကြီးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်လာသလို ကိုအောင်ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို အတင်းဆွဲဆုပ်ပြီး လွတ်ထက်သွားမှာစိုးတဲ့အလား အတင်းဆွဲကပ်ထားပါတယ်။
ကိုအောင်က လျှာနဲ့ စောက်ခေါင်းထဲထိ ထိုးထည့်ပြီး စောက်ပတ်အတွင်းသားနံရံ နုနုတွေကို ကောင်းကောင်းမွေပေးတဲ့ အခါမှာတော့ ဒေါ်မေသီဝင်းဟာ ငယ်သံပါအောင် အော်ဟစ်ပြီး စောက်ရည်တွေ ထွက်ကျကုန်ပါတော့တယ်။ ကိုအောင် နှုတ်ခမ်းမှာတော့ ဒေါ်မေသီဝင်းရဲ့ စောက်ရည်တွေနဲ့ ပေပွကုန်တော့တာပါဘဲ။
“ကဲ.. မောင်လေး ပက်လက်လှန် အိပ်လိုက်”
ဆိုပြီး ကိုအောင်ကို ပက်လက်လှန် အိပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်ခိုင်ချိုမာက ကိုအောင်ရဲ့ မျက်နှာပေါ်ကို တက်ခွလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်မေသီဝင်းကလည်း ကိုအောင်ရဲ့ လီးကြီးကို သူမအဖုတ်ဝနဲ့ ပွတ်နေပါတယ်။ ကိုအောင်မှာ စောက်ပတ်ရဲ့ နူးညံ့မှု အရသာကို လီးထိပ်က ခံစားနေရတာကြောင့် လီးပါကျင်လာပါတယ်။
“ကဲ… မောင်လေး… မေသီမင်းကို တက်ဆောင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ မင်းက မမစောက်ပတ်ကို ယက်ပေး”
လို့ ခိုင်ချိုမာက ပြောလိုက်ပါတယ်။ မေသီဝင်းက သူ့လီးကြီးကို သူမအဖုတ်ထဲ ထည့်နေပါပြီ။
လီးက တုတ်တာကြောင့် သူမစောက်ပတ်ထဲမှာ စီးကြပ်နေသလို ကိုအောင်လည်း သူ့လီးကို သားရေကွင်းနဲ့ စီးထားသလို ကြပ်နေတဲ့ အရသာကို ခံစားရပါတယ်။
လို့ ဒေါ်ခိုင်ချိုမာက ပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့မျက်နှာပေါ် ခွထိုင်ထားတဲ့ ဒေါ်ခိုင်ချိုမာရဲ့ စောက်ပတ်ကို လက်နဲ့ဖြဲပြီး လျှာကိုထုတ်ကာ အဆက်မပြတ် ယက်ပေးပါတော့တယ်။
ဒေါ်ခိုင်ချိုမာနဲ့ ဒေါ်မေသီဝင်းကလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နို့ကို အပြန်အလှန် ဆုပ်နယ်နေကြပါတယ်။ ဒေါ်မေသီဝင်းက လီးကို သူမစောက်ပတ်ထဲကို သွင်းလိုက် ဖင်ကိုကြွပြီးး ဆွဲထုတ်ကာ ပြန်ဆောင့်လိုက်နဲ့ သူ့လီးအရင်းထိ ဒေါ်မေသီဝင်းက စောက်ပတ်နဲ့ ဖိဆောင့်လိုက်တိုင်း သူ့လဥတွေနဲ့ ဒေါ်မေသီဝင်း ဆီးခုံ၊ တင်ပါးနဲ့ ပေါင်နဲ့ ရိုက်သံ တဘတ်ဘတ်၊ တဘွတ်ဘွတ် သံတွေက ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
သူကလည်း ဒေါ်ခိုင်ချိုမာရဲ့ စောက်ပတ်တွေ စောက်စိတွေကို လျှာနဲ့ကစားလိုက် မွှေပေးလိုက် ဖိယက်လိုက် လုပ်နေတာကြောင့် ဒေါ်ခိုင်ချိုမာရဲ့ ကာမဒီရေတိုးသံ တဟင်းဟင်း တအဲအဲ ညဉ်းညူသံတွေက ထွက်ပေါ်နေပါပြီ။
“မောင်လေး.. သွက်သွက်လေး စုပ်ပေးပါ.. အင်း.. အင်း.. မမပြီးခါနီးပြီ.. ပြတ်ပြတ်… ရှီး.. အင်း… အင်း။ မောင်လေး.. မမပြီးတော့မယ်.. တောင့်ထား.. မထွက်စေနဲ့ဦး”
ဒေါ်မေသီဝင်းရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေကလည်း မြန်မြန်သွက်သွက် ဖြစ်လာပြီး ဒေါ်မေသီဝင်းရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို သူ့လရေတွေ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ပန်းထုတ်လိုက်ချိန်မှာ ဒေါ်မေသီဝင်းကလည်း စောက်ခေါင်းထဲက စောက်ရည်တွေ ထွက်ကျလာပါတယ်။ သူ့မျက်နှာပေါ်ခွနေတဲ့ ဒေါ်ခိုင်ချိုမာရဲ့ စောက်စိကို အဆက်မပြတ် လျှာဖျားလေးနဲ့ ကစားလိုက်တော့
ဒေါ်ခိုင်ချိုမာရဲ့ ဖင်ကြီးရှုံ့သွားကာ သူမစောက်ပတ်ထဲက စောက်ရည်ဖြူဖြူချွဲချွဲတွေဟာ သူ့မျက်နှာပေါ်ကို ကျဆင်းလာသလို ပါးစပ်ထဲတွေကိုပါ ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့ဟာ လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ခန့်က တွေ့ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီက ကောင်လေးအကြောင်းကို တွေးနေသည်။ ကောင်လေးကြည့်ရတာတော့ ဖြူဖြူချောချောလေးပါ။ အနည်းငယ် နွမ်းပါးပုံပေါ်သည်။
ဒီကောင်လေး အကြောင်းကို မသိမသာ စုံစမ်းကြည့်တော့ နယ်မှာ မိခင်ကြီးနဲ့ ညီမလေးရှိတယ်။ သူကထောက်ပံ့နေရတာတဲ့။ သူမလိုချင်သော အနေအထားနှင့် ကွက်တိပင်။ ဒီကောင်လေး နာမည်က မြတ်သူလို့ သိရသည်။
သူမတို့ အနေနှင့်က ငွေကြေးချမ်းသာသော ဘဲကြီးကို ငွေမက်လို့သာ လက်ထပ်ယူထားရသည် ချစ်လို့မှ မဟုတ်တာ။ သူမအနေဖြင့် ကောင်လေးကို နေ့လည်က ကုမ္ပဏီမှာ တွေ့စဉ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားသွားသည်။ သူမတို့လောကမှာ ကောင်လေး ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေကို စပွန်ဆာပေးတာက အဆန်းမဟုတ်။ သူမအနေဖြင့် သူမ လင်ကြီး မသိအောင် ဘယ်လိုဂွင်ဆင်ရမလဲ စိတ်ကူးနေမိသည်။
သူမလက်များက ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်တင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ကောက်နှိပ်လိုက်သည်။
ဖုန်းက တန်းဝင်သွားပြီ။ တစ်ဖက်မှ ဦးခင်မောင်တင့် ဖြေသံကို ကြားရပြီ။
“ကိုကြီး… ကျော့ ခရီးထွက်ချင်လို့..”
“မဟုတ်ပါဘူး ကိုကြီးရဲ့… ကျော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ငပလီကို အလည်သွားမလားလို့..။ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ခေါ်နေတာနဲ့။ အဲ့ဒါလေ.. ကျော့ရဲ့ကားကို ကောင်းကောင်းမောင်းနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက် ကိုကြီးကုမ္ပဏီမှာရှိရင် ထည့်ပေးဦး”
ကျော့ကျော့ကား သူမရွေ့ထားသော အကွက်ကို ကြိုရွေ့လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွင် ကားကောင်းကောင်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မောင်းတတ်သူဆိုလို့ မြတ်သူ တစ်ယောက်ထဲသာ ရှိသည်ကို သူမစုံစမ်းပြီးသား။ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ အသာလေး မျဉ်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ငပလီသွားစဉ် ကာလအတွင်း မြတ်သူဆိုသော ကောင်လေးကို သူမနှင့် သူမတို့ သူငယ်ချင်းများရဲ့ ရမ္မက်ဆန္ဒကို ဖြေဖျောက်နိုင်မည့် ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကောင်းကောင်းအသုံးချရန် အကွက်ရွှေ့ပြီးသား။ သူမတို့ သူဌေးကတော် လောကမှာ လင်ငယ်နေတာ တကယ်တော့ မဆန်း။ ကောင်လေး ငယ်ငယ်လေးတွေကို စပွန်ဆာပေးပြီး သူမတို့ အလိုကျ လုပ်ခိုင်း လိုးခိုင်းတာက သူမတို့အဖို့ ဖက်ရှင်တစ်ခုလို ဖြစ်နေသည်။
သူမအနေဖြင့် မြတ်သူဆိုသော ကောင်လေးကို မြင်ကတည်းက အရမ်းကို သဘောကျသွားသည်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးလိုက်တာပင်…။
မိန်းမဖြစ်သူကို သုံးစရာငွေပေးပြီး တကယ်လိုအပ်တာကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော သောက်သုံးမကျသည့် ဦးခင်မောင်တင့်ကတော့ ဒါတွေကို မသိပါ။
သောက်တာ နည်းနည်းများသွားတော့ မြတ်သူတစ်ယောက် အနည်းငယ် မူးနေပြီ။ ငပလီရောက်နေတာ (၃) ရက်ခန့်ရှိပြီ..။ ခရီးထွက်လာရသဖြင့် နေရာသစ် နယ်မြေသစ်မှာ.. သူ့ဘဝမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘဝအမောတွေတော့ အနည်းငယ် ပျောက်သွားသလိုပင်။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း မလိုက်ချင်သည့် ခရီးကို လိုက်ရန် ထိုးထည့်ခဲ့သော သူဌေးဦးခင်မောင်တင့်ကို ကျေးဇူးတင်သလိုလို။
ဒေါ်ကျော့ကျော့မှာ သူငယ်ချင်း အမျိုးသမီး (၂) ယောက်လည်း ပါလာသည်။ ဒေါ်ဝေဝေ ဆိုသော အမျိုးသမီးနှင့် ဒေါ်သီသီ ဆိုသော အမျိုးသမီး။ သူမတို့ (၃) ယောက်လုံးက သက်တူရွယ်တူတွေပင်..။ ဒေါ်ဝေဝေကတော့ ဒေါ်ကျော့ကျော့လို ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေးတစ်ဦး၏ ဇနီး..။ ဒေါ်သီသီကတော့ တပ်ကအရာရှိကြီးတစ်ဦးရဲ့ ဇနီးလို့ မြတ်သူ သိထားသည်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့က သူနှင့် ဘန်ဂလို တစ်လုံးထဲမှာ။ သူမ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က တစ်ခြားဘန်ဂလိုမှာ။ သူမတို့ကလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပင်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူကို သုံးစရာ ငွေများပေးသည်။ နေ့ခင်းဘက်ဆို သူမတို့ (၃) ယောက်က အပြင်ထွက်နေချိန် မြတ်သူလည်း သီးသန့် အပြင်ထွက်သည်။
ညဖက်ဆိုလျှင် ဒေါ်ကျော့ကျော့က သူမသူငယ်ချင်းတွေရှိရာ ဘန်ဂလိုကိုသွားပြီး ဝိုင်သောက်လေ့ရှိသဖြင့် မြတ်သူက ဒေါ်ကျော့ကျော့ ပြန်လာအောင် စောင့်ရသေးသည်။ အလုပ်ရှင်သူဌေးရဲ့ မိန်းမဆိုတော့လည်း သူ့အနေဖြင့် သူမ မငြိုငြင်အောင်
ဂရုစိုက်ပြီး လိုလေသေးမရှိတော့ လုပ်ပေးပါသည်။
ဘန်ဂလိုရှေ့မှ ခေါ်သံကြားရသည်။ ဒေါ်သီသီရဲ့ အသံ…။ မြတ်သူလည်း အပြင်ကို ထွက်လိုက်တော့…. ဒေါ်ကျော့ကျော့ကို ဒေါ်သီသီနှင့် ဒေါ်ဝေဝေတို့က တွဲလာရသည်။
“ဒီမှာကွာ… မင်းမမ မူးနေလို့… သူ့အခန်းထဲတွဲပြီး လိုက်ပို့လိုက်စမ်းပါ.. တို့နှစ်ယောက် ပြန်တော့မယ်..”
မြတ်သူ စိတ်ထဲကတော့ ဒုက္ခဘဲလို့ ညည်းငြူလိုက်သည်။ မူးနေသော ယောင်္ကျားလေးများကို တွဲပို့ခဲ့ဖူးသော်လည်း မူးနေသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို တွဲမပို့ဖူးသဖြင့် မြတ်သူ စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီး ပြန်မပြောနိုင် ဖြစ်နေသည်။
“ဘာကြည့်နေတာလဲ.. နင်… မမကို တွဲပေးလေ..”
ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူပုခုံးကို သိုင်းမှီပြီး အခန်းထဲ တွဲပို့ခိုင်းသည်။ ဒေါ်သီသီနှင့် ဒေါ်ဝေဝေတို့ကတော့ သူမတို့ ဘန်ဂလိုရှိရာကို ပြန်သွားကြသည်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့က မူးမူးနှင့် အတင်းသူ့ကို မှီထားပြီး သူကလည်း ဒေါ်ကျော့ကျော့ လဲမကျအောင် ခါးကို လက်ဖြင့် ဖမ်းထိန်းကာ သူမ အခန်းသို့ပို့ရန် ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသော မြတ်သူအဖို့ ဒေါ်ကျော့ကျော့၏ ကိုယ်သင်းနံ့နှင့် နူးညံ့အိစက်သော အသားစိုင်များ၏ ထိတွေ့မှုကြောင့် သူ့ပုဆိုးအောက်မှ ဖွားဖက်တော်ကြီးက အလိုလိုနေရင်း တင်းမာလာသည်။ ဘောင်းဘီခံဝတ်ထားမိသဖြင့်သာ တော်သေး၏။
အခန်းထဲရောက်တော့ ဒေါ်ကျော့ကျော့ကို ကုတင်ပေါ် တင်တွဲတင်ကာ လှဲတင်ပေးလိုက်သည်။ သူမခန္ဓာကိုယ်ကို မထိန်းနိုင်သဖြင့် သူ့ဂုတ်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ရာ ထပ်ရက်ကြီး ကျသွားတော့သည်။
မြတ်သူ ခါးအောက်ပိုင်းက ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ ပေါင်ခွကြားထဲ ထပ်ကျသွားသဖြင့် ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ ပေါင်ခွကြားမှ အမြောင်းလိုက်ကြီး ဖြစ်နေသော အဖုတ်ကြီး၏ အထိအတွေ့ကို ဒေါ်ကျော့ကျော့၏ ထမိန်ပျော့ပျော့လေး ခံထားတာတောင်မှ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းခနဲဖြစ်အောင် ခံစားလိုက်ရသည်။ လီးထိပ်မှ သုတ်ရည်ကြည်များပင် ထွက်ချင်သလိုလို ဖြစ်သွား၏။
တကယ်တော့ ဒေါ်ကျော့ကျော့ကလည်း မမူးပါ။ ဒီလို အနေအထား ဖြစ်အောင် တမင်သက်သက် ဖန်တီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမ သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော သီသီနှင့် ဝေေ၀တို့ကလည်း ဝါသနာတူ စရိုက်တူတွေလေ။ သူမတို့က အရင်စားချင်နေသဖြင့် မနည်းတောင်းပန်ယူထားရသည်။ မြတ်သူက စိတ်တော့ တော်တော်ထိန်းနိုင်သည့် ကောင်လေးပင်။
ပြန်လည်ရုန်းထမည်ပြုသဖြင့် သူမက မြတ်သူခါးကို လှမ်းဖက်လိုက်သည်။ မြတ်သူ မျက်နှာများပင် ရဲတွတ်သွားသည် အတွေ့အကြုံမရှိမှန်း သိသာသည်။ ဒါမျိုး အတွေ့အကြုံမရှိသည့် ကောင်လေးမျိုးတွေကိုမှ ကျော့ကျော့က ပိုကြိုက်သည်။
ကျော့ကျော့က…. မြတ်သူကို လှမ်းဖက်လိုက်သည်..။
ကျော့ကျော့က မျက်နှာထားကို တင်းလိုက်သည်။
“ဟင်းဟင်း.. မင်းက အဖိုးကြီးကို ဂရုစိုက်နေသေးတယ်..။ မင်း.. မမကို ချစ်ပေးရင် မင်းဘဝ အဆင်ပြေသွားမယ်။ နို့မို့ဆို ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာနဲ့ အဖိုးကြီးကို ပြောပြီး အလုပ်ဖြုတ်ခိုင်းပစ်မယ်။ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေ….”
ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူ ပုဆိုးကို ချွတ်ပြီး ဘောင်းဘီအောက်ကို လက်နှိုက်ကာ.. မြတ်သူရဲ့ လှုပ်ရှားနေသော မွေးရာပါ ညီလေးကို သူမလက်ချောင်းလေးများဖြင့် ဖမ်းဆုပ်လိုက်သည်။ နူးညံ့လှသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ လက်ချောင်းများဖြင့် လီးကိုဖမ်းဆုပ်ခြင်း ခံလိုက်ရသဖြင့် မြတ်သူလည်း အသိလွတ်သွားပြီး ဒေါ်ကျော့ကျော့ကျော့ မျက်နှာကို အငမ်းမရ နမ်းနေမိသည်။
ကျော့ကျော့က မြတ်သူရဲ့လက်ကို သူမလက်ဖြင့် ဆွဲယူလိုက်ပြီး သူမထမိန်အောက်ထဲထည့်ကာ ပေါင်ခွကြားပေါ် အဖုတ်ပေါ်သို့ လက်တင်ပေးလိုက်သည်။ သူမလက်ဖြင့် မြတ်သူလက်ကို အုပ်ကာ အပေါ်အောက် ပွတ်သပ်ခိုင်းသည်…..။ မြတ်သူကို နိုးဆွခြင်း အတတ်ပညာတတ်အောင် သင်ပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
မြတ်သူလည်း ဒေါ်ကျော့ကျော့၏ ဖောင်းကြွကာ အိစက်နေသော အဖုတ်ကြီးကို သေချာစွာ ပွတ်ပေးလိုက်ရာ ဒေါ်ကျော့ကျော့ နှုတ်ဖျားမှ အင်းခနဲ ညဉ်းညူသံလေး ထွက်လာသည်။ ကျော့ကျော့က မြတ်သူလက်ကို အုပ်ထားတာကိုလွတ်ပြီး သူမအင်္ကျီ ကြယ်သီးများ ဖြုတ်ကာ ရင်ကို ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ဝင်းဝါနေသော အသားအရေနှင့် အောက်မှဘော်လီအမဲလေးဖြင့် မနည်းထိန်းသိမ်းနေရသည့် နို့နှစ်လုံးကို မြင်လိုက်ရသဖြင့် မြတ်သူရင်ထဲ တဇတ်ဇတ် တုန်သွားသည်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့က သူ့အင်္ကျီကို ချွတ်ပေးနေသလို သူကလည်း အဖုတ်ပွတ်တာကိုရပ်ပြီး ဒေါ်ကျော့ကျော့၏ ဘော်လီအင်္ကျီချိတ်ကို လှမ်းဖြုတ်နေသည်။ တစ်ခါမှ အလေ့အကျင့် မရှိသူ ဖြစ်သဖြင့်် ဘော်လီကို ဘယ်လိုဖြုတ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေသည်။
ကျော့ကျော့က ကောင်လေး အတွေ့အကြုံ မရှိမှန်း သိသဖြင့် ဘော်လီချိတ်ဖြုတ်နည်းကိုပါ ပြလိုက်ရသည်။ ပြုတ်သွားသော ဘော်လီနှင့်အတူ…. ထင်းခနဲ ထွက်ကြလာသည့် နို့အုံနှစ်လုံးကို မြတ်သူကား ကောင်းကောင်းကြီး ရှုစားခွင့် ရသွားချေပြီ။ ကြီးမားလှသော ရင်အုံနှစ်လုံးထိပ်တွင် နို့သီးလေးများက ထောင်ထနေတာ စို့ချင်စရာကြီးပင်။ သူက ဒေါ်ကျော့ကျော့နို့ကို တပြွတ်ပြွတ်နှင့် စို့တော့သည်။
ပြင်းထန်လှသော စို့ချက်များကြောင့် ကျော့ကျော့ပင် စိတ်လှုပ်ရှားသွားသည်။ သူမ အဖုတ်ထဲမှပင် အရည်ကြည်လေးများ စိမ့်ထွက်လာသည်။
“အင်း အင်း… ကောင်လေးရယ်…”
သူမ ညဉ်းညူသံလေး ထွက်လာသည်။ သူမရဲ့ ထမိန်လေးကိုလည်း လျှောချွတ်ကာ ကုတင်အောက်သို့ လှမ်းပစ်လိုက်ချိန်တွင် မြတ်သူ ကိုယ်ပေါ်တွင်လည်း အဝတ်အစားကင်းမဲ့သွားချေပြီ။
ငေါက်ကနဲ ထွက်လာသော လီးတံကြီးကို ကြည့်ကာ ဒေါ်ကျော့ကျော့ တံတွေး တနင်နင် ဖြစ်သွားသည်။ ကောင်လေး၏ တယမ်းယမ်းနှင့် လီးကြီးကိုကြည့်ကာ အသွေးအသားထဲပင် စိမ့်တက်သွားသည်။ လူပျိုလေးမှန်း သိသာသည်။ လီးတံထိပ်ကို အရေပြားက ငုံနေတုန်း။ ဒစ်မပြုတ်သေးဘူးလေ။
မြတ်သူ ဒေါ်ကျော့ကျော့ကို ဘယ်လို လိုးရမှန်းမသိ။ သူမ ပေါင်ခွကြားထဲတွင် ကို့ယိုကားယားနှင့် ဘယ်လို လိုးလို့ လိုးရမှန်းပင် မသိ။ အဖုတ်ဝကို လီးတေ့ပြီး မထည့်ရဲဘူး ဖြစ်နေသည်။
“ခစ်ခစ်… လူညံ့လေး.. အဖုတ်လိုးချင်တာကို ဘယ်လို လိုးရမှန်းမသိဘူး….။ ပက်လက်လှန်လိုက် မမသင်ပေးမယ်…”
ဆိုပြီး မြတ်သူကို တွန်းလှဲကာ ပက်လက်ဖြစ်သွားသော မြတ်သူကိုယ်ပေါ်ကို သူမက တက်ခွလိုက်သည်။ ပြီးတာနဲ့ တယမ်းယမ်း ဖြစ်နေတဲ့ မြတ်သူလီးကို သူမလက်နဲ့ ဖမ်းထိန်းပြီး စောက်ပတ် အမြောင်း နှစ်ခုကြားမှာ ထိပ်ကိုတေ့ပြီး အသာပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ မြတ်သူကား ဖော့တုံးလို နူးညံ့နေသည့် ဒေါ်ကျော့ကျော့၏ စောက်ပတ်ပွင့်ဖတ်များ၏ ပွတ်တိုက်မှုကို လီးထိပ်မှာ ခံစားလိုက်ရသဖြင့် ထိပ်ဖျားမှ အရည်ကြည်များ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမနိုင် ထွက်ကျကုန်တော့သည်။
ဟုပင်.. သူ့နှုတ်ဖျားမှ အသံတွေ ထွက်ကုန်သည်။
“ခစ်ခစ်…. သူများက မညဉ်းရဘူး.. သူချည်း ညဉ်းနေတယ် ကောင်စုတ်လေး..”
ကျော့ကျော့က စိတ်ထဲမှ ပြောလိုက်ပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲသို့ ကောင်လေး၏ ဖွံထွားလှသော လီးတံကြီးကို ဖိကာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ အကြောတပြိုင်းပြိုင်း ယှက်သမ်းနေသော မိန်းမ မလိုးဖူးသေးတဲ့ ကောင်ချောလေး မြတ်သူရဲ့ လီးကြီးက သူမအဖုတ်ထဲကို တဖြည်းဖြည်းချင်း မြုတ်ဝင်သွားတော့သည်။
မြတ်သူမှာလည်း ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ အဖုတ်ထဲ သူ့လီးကြီး ဝင်သွားသော အရသာကို ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နူးညံ့လှတဲ့ စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေက သူ့လီးချောင်းကြီးကို ဖမ်းညှစ်ထားတာကြောင့် သူ့မျက်လုံးတွေပါ မှေးစင်းသွားရလောက်အောင် မိန်းမောနေပါတယ်။ သူ့လက်တွေကလည်း အလိုလို မြောက်သွားပြီး ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆုပ်နယ်ပေးနေပါတယ်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ အဖုတ်ထဲကို လီးတစ်ဆုံး မြုတ်ဝင်သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဖော့တုံးလို နူးညံ့တဲ့ အရာတစ်ခုနဲ့ လီးထိပ် တိုက်မိသလိုဖြစ်ပြီး ကျင်ခနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့က သူမနို့တွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မြတ်သူလက်တွေကို သူဖက်လက်နဲ့ကိုင်ပြီး ဖင်ကိုကော့ကာ အဖုတ်ထဲကနေ လီးထိပ်နားထိရောက်အောင် ပြန်ဆွဲထုတ်ကာ ပြန်ဖိထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ မြတ်သူကလည်း အားမလို အားမရ ဖြစ်လာတာကြောင့် ခါးကိုကော့ပြီး ပြန်ပင့်တင်နေပါတယ်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့က စိတ်ကြိုက်အနေအထား ရောက်ပြီမို့ မြတ်သူအပေါ်ကနေ အဆက်မပြတ် ဖင်ကိုကြွလို့ စိတ်ကြိုက်ဆောင့်တော့သည်။
“ရှီးရှီး.. စွပ်စွပ်… အင်းအင်း.. အိုး.. အိုး…”
နှစ်ယောက်သား ကာမပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိရေး သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကြဲတော့သည်။
အရေကြည်တွေ လိုက်လာတာကြောင့် စောက်ပတ်ထဲ လီးဝင်သံ/ထွက်သံတွေက ပိုကျယ်လာသလို ကုတင်ကြီးပါ လှုပ်ခါလာတော့သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ မြတ်သူတစ်ယောက် အကြောဆွဲသလိုဖြစ်ပြီး လီးထိပ်က ပူခနဲဖြစ်သွားကာ သူ့လရေတွေကို ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကို ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ ပန်းထွက်ကုန်သလို ဒေါ်ကျော့ကျော့ကလည်း တွန့်ခနဲ တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး စောက်ပတ်ထဲက စောက်ရည်တွေ ထွက်ကျကုန်ရာ လီးကိုဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူမစောက်ပတ်ထဲက ကျဆင်းလာတဲ့ လရေနဲ့ စောက်ရည်တွေဟာ မြတ်သူဆီးခုံပေါ်ကို ကျပြီး ပေကုန်ပါတော့သည်။
မြတ်သူရဲ့လီးကား လရေတစ်ချီ ထွက်သွားသဖြင့် အနည်းငယ် ပျော့သွားသည်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူရဲ့လီးကို လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
“နေဦး မောင်လေး.. ရေချိုးခန်းထဲလိုက်ခဲ့… နည်းနည်းပွသွားတယ်….”
မြတ်သူကား အာစေးမိသလိုပင် ဒေါ်ကျော့ကျော့က သူ့လီးတံကိုကိုင်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ခေါ်သွားသဖြင့် ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ ပါသွားသည်….။ ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူရဲ့ လီးနဲ့ ဆီးခုံမှာ ပေပွနေတဲ့ သုတ်ရေတွေကို ရေပန်းလေးဖြင့် ပွတ်ဆေးပေးလိုက်သည်။
မြတ်သူကလည်း… ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ အဖုတ်လေးကို ရေပန်းဖြင့်ဖြန်းကာ လက်ဖြင့် ပွတ်ဆေးပေးလိုက်သည်။
“ဒါဆို မောင်လေး မမခိုင်းတာ အကုန်လုပ်မှာပေါ့”
“ခစ်ခစ်… လာ… အာ့ဆို အခန်းထဲ ပြန်လိုက်ခဲ့..”
ဒေါ်ကျော့ကျော့နှင့် မြတ်သူကား တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ပွေ့ဖက်နမ်းရှုပ်ရင်း အခန်းထဲက ကုတင်ကြီးပေါ် ပြန်ရောက်သွားသည်။
“လာ.. မမပြမယ်..။ ပက်လက်လှန်နေလိုက်”
မြတ်သူကား ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်နေလိုက်သည်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့က သူ့မျက်နှာပေါ် တက်ခွလိုက်သည်။ အခုမှ သဘောပေါက်သွားသည်….။ သူမကြာခဏ ကြည့်တတ်သော အပြာကားထဲကတွေလိုပင်။
ဇာတ်ကားထဲမှာ သူမကြာခဏ မြင်ဖူးပေမဲ့ ယခုလို အပြင်မှာ ကြုံတွေ့ရတော့ သူသိပ်မရဲ ဖြစ်နေသည်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့ခေါင်းက သူ့ပေါင်ကြားထဲ မျက်နှာအပ်သွားပြီး သူ့လီးကိုကိုင်ကာ သူမရဲ့ စိုစွတ်ပူနွေးနေသော နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ငုံလိုက်ချိန်မှာ သူ့အသည်းထဲ ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ် ဖြစ်သွားသည်။ သုတ်ရေတွေပင် ပန်းထွက်ချင်သလိုလို။
သူ့မျက်နှာ တည့်တည့်မှာလည်း ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ ရွှေရောင်အမွေးနုလေးတွေနဲ့ လိမ်ကောက်နေတဲ့ အဖုတ်က ညှီစို့စို့ရနံ့လေးကိုရချိန်မှာ သူ့စိတ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိ။ သူသတိပြန်ဝင်လာချိန်မှာတော့ ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ အဖုတ်လေးကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖြဲပြီး သူမရဲ့ ပန်းနုရောင် အဖုတ်အသားပြင်လေးနဲ့ ညိုတိုတို အဖုတ်နှုတ်ခမ်းက ပွင့်ဖတ်လေးတွေကို သူ့လျှာနဲ့ ယက်ပေးနေမိသည်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ စောက်စိလေးကိုလည်း ချိုချဉ်စုပ်သလိုပဲ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ တပြွတ်ပြွတ် စုပ်ပေးနေတာကြောင့် ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ အဖုတ်ထဲက သုတ်ရေတွေ အဆက်မပြတ် ထွက်ကျနေသလို… ဒေါ်ကျော့ကျော့ကလည်း အားကျမခံ… မြတ်သူ လီးထိပ်လေးက ကျင်ငယ်ပေါက်လေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ဖိဖိပြီး ယက်ပေးနေတာကြောင့် လီးတစ်ခုလုံး ပြောမပြနိုင်အောင် ကောင်းမွန်နေသလို လီးတံကြီးကိုလည်း လျှာနဲ့ ဖိဖိပြီး ကစားပေးနေတာကြောင့်… မြတ်သူအဖို့ နတ်ပြည်ရောက်နေရသလိုပင်။ သူ့လီးထဲက လရေတွေဟာ ဒေါ်ကျော့ကျော့ ပါးစပ်ထဲ ပန်းထွက်ကုန်ပြီး ဒေါ်ကျော့ကျော့က သူ့လရေတွေကို မြိုချပစ်လိုက်သည်။
“အင်း အင်း… မောင်လေး… စုပ် စုပ်ပေးဘာ…. အင်း အင်း…”
“ပြွတ် ပြွတ်… အ အ… ထွက် ထွက်ကုန်ပြီ.. မောင်လေးရေ… အင်း… ဟင်း သိပ်တော်တာဘဲ….”
ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ အဖုတ်လေးက ရှုံ့တွရှုံ့တွဖြစ်သွားပြီး သူမအဖုတ်ထဲက ပျစ်ချွဲချွဲ သုတ်ရေတွေ ထွက်ကျလာတော့သည်။ မြတ်သူလည်း အားကျမခံ ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ အဖုတ်လေးထဲက အရေတွေကို လိုက်ယက်ပြီး မြိုချပစ်လိုက်သည်။
နင်တင်တင် ဖြစ်သွားပေမဲ့… သူမရဲ့ စောက်ရည်တွေဟာ မြတ်သူအတွက်တော့ အဝင်မဆိုးလှပါဘူး။ ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူလရေတွေကို မြိုချလိုက်လို့ ကျေးဇူးပြန်ဆပ်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။
ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူကို ဆွဲထူလိုက်ပြီး အပြန်အလှန် နမ်းရှုပ်နေသည်။ မြတ်သူကား ဒေါ်ကျော့ကျော့၏ ရမ္မက်နွံမှာ နှစ်မျှောနေချေပြီ.။ ဒေါ်ကျော့ကျော့ကား မြတ်သူကို ဆွဲဆောင်နေချေပြီ။
“မောင်… မမကို ချစ်လား….”
“အာ့ဆို မင်းလေးက မမခိုင်းတာကို လုပ်မှာလား”
မြတ်သူကား ကာမဒီရေတောမှာ မျှောချင်တိုင်း မျှောနေသဖြင့် ဘာကိုမှ မမြင်တော့။
“အို… ပြောစရာလိုသေးလို့လား မမရယ်…”
“တကယ်နော်… မောင်လေး.. ဒါဆိုခဏစောင့်….”
ဒေါ်ကျော့ကျော့ကပြောပြီး သူမကုတင်ပေါ်မှ ထသွားသည်။ သူမ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှ တစ်စုံတစ်ခုကို ထုတ်နေသည်။ ကြိုးတစ်ချောင်း ဖြစ်နေသည်။ အသင့်ယူဆောင်လာပုံရသည်။ ကိုယ်လုံးတီး အနေအထားနှင့် ကြိုးကိုယူပြီး ကုတင်ဆီလှမ်းလာနေသော ဒေါ်ကျော့ကျော့ကို ကြည့်ရသည်မှာ မြတ်သူအတွက် ရမ္မက်ဖိုစရာကြီး ဖြစ်နေသည်။
ဘာလုပ်မည်ကို မြတ်သူသိသလိုလိုဘဲ။ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာတော့ မြင်ဖူးသည်။
အမျိုးသမီးများက ယောင်္ကျားတွေကို ကြိုးတုပ်ပြီး ဖိုက်သော အခန်းတွေ။ အနိုင်ကျင့်သလိုလို ဆန်ပေမဲ့ မြတ်သူသဘောကျသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ဒါမျိုးမရှိဟု မြတ်သူထင်ထားတာ… ဒေါ်ကျော့ကျော့နဲ့တွေ့မှ သူမှားနေသည်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့က သူ့အနားတွင် လာရပ်လိုက်ပြီး မြတ်သူ လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူလိုက်သည်။ မြတ်သူကလည်း အာစေးမိသလို ဖြစ်နေပြီး စကားသံ မထွက်နိုင်။ လက်နှစ်ဖက် အလိုလိုနေရင်း ဒေါ်ကျော့ကျော့ ချည်ရတာလွယ်အောင် စုံပူးကာ ရှေ့ကိုထိုးပေးလိုက်သည်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့က သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို ကြိုးဖြင့် ပူးချည်နေချိန်မှာ… သူ့ရင်ခုန်သံ တဒုတ်ဒုတ်ကို သူပြန်ကြားနေရသလို… လီးကလည်း ပိုပြီး တောင်လာသည်။ ကုတင်ဘောင်တွေက မြင့်သဖြင့် သူ့ကို ဒေါ်ကျော့ကျော့က ကျောမှီစေလိုက်ပြီး ကုတင်နှင့် ကပ်လျှက်နံရံက သံကွင်းမှာ လက်ကို မြောက်စေကာ ပူးပြီးတွဲချည်လိုက်သည်။
မြတ်သူ၏ ထောင်ထားသော ဒူးကို.. လျှောချစေပြီး ခြေဆင်းစေသည်။ တကယ်တော့ ဒေါ်ကျော့ကျော့ကား သာမန်ထက်ပိုသော လိင်ကိစ္စများကို ဝါသနာပါသူပင်။ ဒီလိုမျိုး လုပ်ချင်တာက မြတ်သူဆိုသော ကောင်လေးနှင့်တွေ့မှ လုပ်ခွင့်ရတော့သည်။ ပြောရလျှင်တော့ အနိုင်ကျင့်ခြင်းဆန်သော လိင်ကိစ္စမျိုးမှာ သူမဝါသနာပါခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြီးနောက် ဒေါ်ကျော့ကျော့ကား မြတ်သူ၏ ပေါင်ပေါ်တွင် ခွထိုင်လိုက်ပြီး မြတ်သူခေါင်းကို ဆွဲယူကာ သူမနို့များဖြင့် မြတ်သူပါးစပ်ကို တေ့ပေးလိုက်သည်။
မြတ်သူကား ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ နို့တစ်ဖက်ကို ငုံပြီး စို့ပေးသည်။ အသီးလေးကို လျှာနဲ့ကလိပြီး ယက်ပေးသည်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူကို နို့နှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီ စို့ခိုင်းပြီး ဇိမ်ယူနေသည်။ မြတ်သူအဖို့ လက်နှစ်ဖက်ကို ကြိုးနဲ့ တွဲလောင်းချည်ထားခြင်း ခံရပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်တာကို တော်တော် သဘောတွေ့နေသည်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့က နို့စို့ခိုင်းတာကို ရပ်လိုက်ပြီး မြတ်သူရဲ့ နားရွက်ဖျားလေးတွေကို စနမ်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမကိုယ်ကိုအောက်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း လျှောဆင်းလာပြီး မြတ်သူရဲ့ နို့သီးတစ်ဖက်ကို လျှာနဲ့ဝိုက်ယက်ပြီး တစ်ဖက်က မြတ်သူရဲ့ နို့သီးတစ်ဖက်ကို လက်ညိုးနဲ့ လက်မကိုသုံးပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ချေပေးတဲ့အခါမှာတော့ မြတ်သူပါးစပ်က တဟင်းဟင်း ညဉ်းညူသံတွေ ထွက်လာပြီး ပေါင်ကြားထဲက လီးကြီးကလည်း တစ်ယမ်းယမ်းဖြစ်နေတော့သည်။
မြတ်သူရဲ့ လီးကြီးနေရာကို သူမရောက်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ သူမဘယ်လက်နဲ့ မြတ်သူရဲ့ လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး… ညာလက်က လက်ခလယ်ကို တံတွေးဆွတ်လိုက်ကာ မြတ်သူရဲ့ ဖင်ပေါက်ထဲကို လက်တစ်ဆစ်ခန့် ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ဒီလိုဖင်ထဲကို လက်နှိုက်ပေးပြီး လီးကိုဆွခံရရင် ဘယ်ယောင်္ကျားမှ မခံနိုင်ဖူးဆိုတာ သူမသိနေလို့ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်က မြတ်သူရဲ့ လီးထိပ်က ကျင်ငယ်ပေါက်လေးကို ဘယ်လက်နဲ့ အသာဖြဲပြီး လျှာနဲ့တို့ပြီး
“အိုး ဟိုး ဟိုး…”
မြတ်သူကတော့ သွက်သွက်ခါသွားသည်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူရဲ့ လီးထိပ်ဖျားတွေကို ပါးစပ်နဲ့ အသာငုံပြီး လျှာနဲ့ ကလိပေးတဲ့ အချိန်မှာတော့ မြတ်သူရဲ့ ပေါင်တွေဟာ အငြိမ်မနေတော့ဘဲ လီးကို ကော့ကော့ပေးနေတော့သည်။
လီးတစ်ချောင်းလုံး ကျင်နေတာကြောင့် မြတ်သူ လိုးချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
“အိုး… အင်းအင်း… မမ… ကျွန်တော် လိုးချင်လှပြီ…. ပြွတ်ပြွတ်… အင်းဟင်းဟင်း..”
မြတ်သူ စကားသံ မထွက်နိုင်တော့ဘဲ ညည်းနေသည်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ ပညာပြမှုအောက်မှာ မြတ်သူတစ်ယောက် လိုးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လွန်းလို့ တစ်ကိုယ်လုံး နတ်ပူးသလိုကို တုန်ယင်နေသည်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့က ပညာပြတာ တော်လောက်ပြီလို့ထင်ပြီး လီးကိုဆွတာရပ်လို့ မတ်တပ်ထလိုက်သည်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူရဲ့ မျက်နှာကို ခွပြီးရပ်လိုက်သည်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ စောက်ဖုတ်လှလှလေးဟာ သူ့မျက်နှာရှေ့မှာ ကပ်နေပါပြီ။ ဒေါ်ကျော့ကျော့က သူမရဲ့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ညာလက်ညိုးနဲ့ လက်မကို သုံးပြီး မြတ်သူနှုတ်ခမ်းနဲ့ တေ့ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့… လိုးချင်စိတ် ပြင်းထန်နေတဲ့ မြတ်သူဟာ ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို လျှာကိုသုံးပြီး သဲသဲမဲမဲ ယက်ပါတော့သည်။
“ဟင်းဟင်း… အင်းအင်း…. ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရေ…”
မြတ်သူရဲ့ သူမစောက်ပတ် အတွင်းသား အသားပြင်တွေကို အငမ်းမရ ယက်နေမှုကြောင့် ဒေါ်ကျော့ကျော့ဟာလည်း အလိုးခံချင်စိတ်တွေ ပြင်းထန်လာပြီး အဖုတ်ထဲက အရည်ကြည်တွေ ထွက်ကျလာပါပြီ။ သူမက စောက်ပတ်ယက်ခံတာကို ရပ်လိုက်ပြီး မြတ်သူရဲ့လီးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာ သူမစောက်ပတ်နဲ့တေ့ကာ အငမ်းမရ ဆောင့်တော့သည်။
“ဘွတ်… ဘွတ်… ရှီးရှီး။ ပွတ်… ပွတ်… ပလွတ်… ပလွတ်… ပေါက်ပေါက်…”
စောက်ပတ်နဲ့ လီးတစ်ဆုံး အဆက်မပြတ် ဆောင့်ချနေတာကြောင့်…. မွေ့ယာထူကြီးကလည်း ဆောင့်ချလိုက်တိုင်း မြင့်လိုက်နှိမ့်လိုက် ဖြစ်နေသလို… ဒေါ်ကျော့ကျော့ စောက်ပတ်နဲ့ မြတ်သူလီးထဲက အရည်ကြည်တွေ ထွက်နေတာကြောင့်… စောက်ပတ်ထဲ လီးဝင်သံ ထွက်သံတွေကလည်း တိတ်ဆိတ်တဲ့ညမှာ ဆူညံနေသည်။ အစောကတည်းက ပြီးတာများနေတာကြောင့် ဒီတစ်ခါ နှစ်ယောက်လုံး ပြီးဖို့က တော်တော်ကြာနေသည်။
ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူခေါင်းကို သူမနို့နဲ့အပ်ပြီး လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆောင့်ထားကာ အဆက်မပြတ်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်နေတာ မြတ်သူ ဥတွေ ဆီးခုံတွေတောင် အောင့်လာပါသည်။
“ပလွတ်… ပလွတ်… အင်းအင်း… ဘွတ်.. ဘွတ်… အိုးအိုး”
“ရှီး… အင်းအင်း… မောင်လေး မထွက်အောင် ထိန်းထား မမပြီးတော့မယ်…”
ဒေါ်ကျော့ကျော့က အဆက်မပြတ် ဆောင့်ချရင်း လေးငါးဆယ်ချက်ခန့် အရောက်မှာတော့ သူမတွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး စောက်ရေတွေ ထွက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ မြတ်သူကလည်း ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ လရေတွေကို သူမစောက်ခေါင်းထဲ ပန်းထုတ်နေတာကို
မနက်မိုးလင်းလာချေပြီ..။ ညက တစ်ညလုံးနီးနီး လိုးပွဲဆင်နွဲလိုက်ရတော့ မြတ်သူနှင့် ဒေါ်ကျော့ကျော့ကား မောပန်းမှုကြောင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျနေသည်။
မြတ်သူကား အရင်ဦးဆုံး နိုးလာသည်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ စောင်ကိုခြုံပေးလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းလာခဲ့သည်။ သူ့အခန်း ပြန်အရောက် ရေအရင်ဆုံး ချိုးလိုက်သဖြင့် လူတစ်ကိုယ်လုံး ပြန်လည်လန်းဆန်းသွားသည်။ ရေချိုး အဝတ်အစား ဝတ်ပြီးသည့် အခါတွင် လေကောင်းလေသန့်ရှူရန် အပြင်သို့ ထွက်လိုက်သည်။
ဘန်ဂလိုမှ အပြင်ဘက်သို့ ထွက်လိုက်သည့်အခါ သူတို့ ဘန်ဂလိုဘက်ကို လာနေသော ဒေါ်သီသီနှင့် ဒေါ်ဝေဝေကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် သူ့စိတ်ထဲက တော်ပါသေးရဲ့ဟု တွေးလိုက်မိသည်။ နို့မို့ဆို မလွယ်ဘူးလေ… ဒေါ်ကျော့ကျော့ အခန်းထဲမှာ သူအိပ်နေတာကို သူမတို့ (၂) ဦး မြင်လိုက်လို့ကတော့ သူရှင်းလို့ကိုရမှာ မဟုတ်တော့။ သို့သော် သူလည်း မဟုတ်တာ လုပ်ထားသူပီပီ ဒေါ်သီသီနှင့် ဒေါ်ဝေဝေကို စေ့စေ့မကြည့်ရဲ။ သူမတို့ အနားရောက်စဉ် ခေါင်းကိုအသာ ငုံ့ထားလိုက်သည်။
“ကောင်လေး… ကျော့ကျော့ နိုးနေပြီ မဟုတ်လား…”
“ဟုတ်… အစ်မအိပ်နေတုန်း ထင်တယ်ခင်ဗျ”
ဒေါ်သီသီနှင့် ဒေါ်ဝေဝေက သူ့ကို ကျော်သွားမည်အပြု ပြီးမှ… ဒေါ်ဝေဝေက သူ့အနားကပ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ပါသော အပြုံးဖြင့်….
“ဟုတ်မှာပေါ့ မင်းမမက ညကတော်တော် မောသွားတယ် ထင်တယ်…”
ပြန်ဖြေလိုက်သော မြတ်သူအသံက အနည်းငယ် တုန်သွားသည်။ ထို့နောက် ဒေါ်ဝေဝေက တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည်..။
“ဟင်းဟင်း… မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ သူတွေ… တော်တော် ခက်တယ်နော်…. ညကျရင် တို့ (၂) ယောက်ပါ လာခဲ့မယ်.. သိလား”
လို့ပြောပြီး… သီသီရေ သွားကြရအောင်ဆိုပြီး ဒေါ်ကျော့ကျော့ရဲ့ ဘန်ဂလိုထဲ ဝင်သွားပါတော့သည်။ သူမတို့နှစ်ယောက် ဘန်ဂလိုထဲ ဝင်သွားချိန်မှာ မြတ်သူတစ်ယောက်ကတော့ လမ်းဆက်မသွားနိုင်ဘဲ… ရပ်နေပြီး… ဒေါ်ဝေဝေပြောတဲ့ စကားအဓိပ္ပါယ်ကို စဉ်းစားနေမိသည်။ သိများသိနေတာလားဆိုပြီး သူ့ရင်ထဲမှာ စိုးထိတ်မိသွားတော့သည်။
သူမနားတွင် စကားပြောသံလိုလို ကြားရတာကြောင့် ဒေါ်ကျော့ကျော့ နိုးလာခဲ့သည်။
ဝေဝေ နှင့် သီသီက ကျော့ကျော့ကို ပြီတီတီကြည့်ကာ မေးလိုက်သည်။ ကျော့ကျော့ ကိုယ့်ဘာသာကို မလုံမလဲ ဖြစ်သွားသည်…။
“ဘယ်လိုလဲ.. ညက တော်တော်မှ ပွဲကောင်းခဲ့ရာလား… မိန်းမ…”
“ဟင်… ဘာတွေ ပြောနေကြတာလဲဟင်…”
“အောင်မယ်… ညည်းနော်ညည်း… အကြောင်းမသိဘူးများ မှတ်နေတာလား…”
ဝေဝေ နှင့် သီသီက ကျော့ကျော့ရဲ့ စောင်ကို ဆွဲလှန်လိုက်သည်။ အောက်မှာ ကိုယ်လုံးတီးကြီး ဖြစ်နေသည်…။ ကျော့ကျော့က စောင်ကို ပြန်ဆွဲယူသည်..။ သီသီနှင့် ဝေဝေက သူမအဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့်စမ်းကာ….
“ကြည့်စမ်း… ဝေဝေ… တော်တော် ယောင်နေပြီ.. သေချာပြီ..”
“အာ့တော့ ညဉ်းတို့က ဘာဖြစ်ချင်တာတုန်း… မိန်းမတွေ…. ယွကိုယွတယ်…”
ကျော့ကျော့က စောင်ကို ပြန်ခြုံကာ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ရှက်ရှက်နဲ့ အော်သည်။
“အံမယ်.. ညဉ်းကောင်လေးကို ဒီအထိ ညဉ်းလူကြီးကို အကြောင်းပြပြီး ခေါ်လာကတည်းက သိပြီးသား..။ အာ့တော့… နှုတ်ပိတ်ခလေး ပေးရုံပေါ့ဟယ်… ဒီလောက်ပါဘဲ… ခစ်ခစ်..”
ဝေဝေ နှင့် သီသီကား ရယ်ကာ ကျော့ကျော့ကို ဝိုင်းကလိထိုးလိုက်သည်.။
ကျော့ကျော့ ဆက်အိပ်လို့ မရတော့။ သီသီနှင့် ဝေဝေကား သူမနှင့် ဝါသနာတူ စရိုက်တူ အတွင်းသိ အစင်းသိ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သည်။
“ညဉ်း စားချင်နေမှန်းသိလို့ ညက ဂွင်ဆင်နေတာ မသိတာကျနေတာဘဲ… ကျော့ကျော့ရယ်..”
“အာ့တော့… ညဉ်းတစ်ယောက်ထဲ စားသွားတာ ကျေနပ်တယ်များ မှတ်နေလား.. ဟင်း”
ဝေေ၀က ကျော့ကျော့ကို မကျေနပ်သလို ပြောလိုက်သည်။ ကျော့ကျော့က….
“စိတ်မဆိုးပါနဲ့ မိန်းမတွေရယ်..။ ကောင်လေးက အသစ်လေးမို့ပါ…။ ညဉ်းတို့နဲ့တွေ့ရင် ကျင့်သားရနေအောင်လို့ပါ”
“ညဉ်းနော်.. ကတိ.. ကတိ..”
“နှုတ်လုံစေချင်ရင် ဒီညဘဲ စီစဉ်ပေး..”
သီသီကလည်း.. ဝင်ပြောလိုက်သည်။ (၃) ယောက်သား လင်ငယ်ထားဖို့ ခွဲတမ်းချနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဟုတ်ပြီ… ကတိပေးတယ်… ဒီညဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးမယ်… ကျေနပ်ပြီလား… တကထဲ… ကဲကိုကဲတယ်…”
“ခစ်ခစ်… ဒါမှ တို့သူငယ်ချင်း…. လိမ္မာတယ်… ဟိဟိ…”
သီသီနှင့် ဝေဝေရဲ့ ရယ်သံလေးများနှင့် ကျော့ကျော့က သူမတို့နှစ်ယောက်ကျောကို ထုရိုက်သံများက အခန်းလေးထဲမှာ ထွက်ပေါ်လာပါတော့သည်။
ထိုအချိန်မှာ အခန်းနားကို ပြန်ရောက်နေပြီး သူမတို့ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာကို ချောင်းပြီး ခိုးနားထောင်နေတဲ့ မြတ်သူကတော့ ထိုစကားတွေကို ကြားလိုက်ရတာကြောင့်.. ဒီညမှာ သူ့ကို ဒေါ်ကျော့ကျော့ သာမက သူမသူငယ်ချင်း (၂) ယောက်ကပါ (၃) ယောက် တစ်ယောက် လိုးခိုင်းပြီး လိုးပွဲဆင်နွဲခိုင်းတော့မှာကို သိလိုက်ရတာကြောင့် လီးကြီးက တောင်လာပြီး လရေများပင် ထွက်ချင်သလိုလို ဖြစ်သွားပါတော့သည်။
မြတ်သူကား စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် တုန်တုန်ယင်ယင် ဖြစ်နေပြီး အခန်းပေါက်ကနေ တိတ်တိတ်ကလေး ပြန်ထွက်လာရာ အခန်းထောင့်မှာ ရှိနေတဲ့ နို့ဆီခွက်အခွံ တစ်လုံးကို ခြေထောက်နဲ့ တိုက်မိသွားသည်။
အခန်းထဲမှာ စကားကောင်းနေတဲ့ ဒေါ်ကျော့ကျော့နဲ့ သူငယ်ချင်းမ နှစ်ယောက်ဟာ အသံကြားလိုက်ရတာကြောင့် အခန်းပြင်ကို ဗြုန်းခနဲ ထွက်လာတဲ့အခါမှာ မြတ်သူကို မြင်လိုက်ကြပါတော့သည်။
မြတ်သူကလည်း ဘာပြောရမှန်းမသိ အိုးတိုအမ်းတမ်း ဖြစ်နေသည်။ ဒေါ်သီသီက မြတ်သူကို ကြည့်လိုက်ပြီ။
“ဟင်… နင် ငါ့တို့ စကားပြောတာ ချောင်းပြီး ခိုးနားထောင်နေတယ်ပေါ့..”
မြတ်သူကား ကပျာကယာ ငြင်းလိုက်သည်။ ဒေါ်ဝေဝေက
ဟု ဆိုကာ မြတ်သူအနားသို့ လျှောက်လာသည်။ မြတ်သူကိုကြည့်ပြီး..
“နင့်မှာ အပြစ်ရှိတယ်… ဒီတော့ ငါတို့ အပြစ်ပေးတာခံရမယ်.. ခံမှာလား”
သူ့ကို ပြီတီတီကြည့်ရင်း မေးနေတာကြောင့် မြတ်သူလည်း အာစေးထည့်ထားသလို ဖြစ်နေသည်။
“ကဲ… အခန်းထဲလိုက်ခဲ့… နင့်ကိုကောင်းကောင်း ဒဏ်ပေးရမယ်။ ငါတို့စကားကို ချောင်းနားထောင်နေတဲ့အတွက်”
“ဟင်း… နင် ငါတို့ ပြောစကားတွေကြားပြီး လီးက တော်တော်တောင်နေပြီ ထင်တယ်… မှန်းစမ်း”
မြတ်သူရဲ့ ပေါင်ကြားကို လက်နဲ့ နှိုက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ မြတ်သူရဲ့ လိင်တံကြီးက မာကျောတောင့်တင်းနေတာကို ကောင်းကောင်း စမ်းမိသွားသည်။
“ဟွန်း.. အစစ်ဘဲ တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်…။ လိုက်ခဲ့စမ်း… အခန်းထဲကို…”
ဒေါ်သီသီနဲ့ ဒေါ်ဝေဝေက မြတ်သူကို နှစ်ယောက်ညှပ်ပြီး အခန်းထဲ ခေါ်သွားချိန်မှာ ဒေါ်ကျော့ကျော့ကတော့ မြတ်သူ သူမတို့ကို ကောင်းကောင်းလိုးနိုင်ဖို့ သောက်ဖို့ရာ ကြက်ဥနဲ့ ငှက်ပျောသီးကို ခွက်ကြီးကြီးနဲ့ သွားဖျော်ပေးနေသည်။
အခန်းထဲမှာတော့ ဒေါ်ဝေဝေနဲ့ ဒေါ်သီသီက မြတ်သူကို ကုတင်ကြီးဆီကို ခေါ်သွားကြပြီး သူမတို့ စိတ်ကြိုက်ချနိုင်အောင် အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ခိုင်းနေသည်။ မြတ်သူကား တစ်ကိုယ်လုံး အဝတ်အစား ကင်းမဲ့သွားချေပြီ..။ သူ့ရဲ့ လီးတံကြီးက မာကျောတောင့်တင်းနေပြီး တယမ်းယမ်း ဖြစ်နေသည်။
ဒေါ်သီသီနဲ့ ဒေါ်ဝေဝေကလည်း တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဘော်လီနဲ့ ပင်တီသာ ကျန်တော့သည်။ သူမတို့ရဲ့ နို့တွေဟာ ကြီးလှတာကြောင့် ဘော်လီအောက်ကနေ ပြူထွက်နေသည်။ ပင်တီအလယ်မှ အဖုတ်အမြောင်းလေးတွေကလည်း ပင်တီပေါ်မှာ ထင်းနေသည်။ နှစ်ယောက်လုံး ကာမစိတ်တွေ ကြွနေတာကြောင့် ပင်တီမှာပင် စိုစွတ်နေပါသည်။
သူမတို့က မြတ်သူကို ကုတင်ပေါ် တွန်းလှဲလိုက်တဲ့ အခါမှာ မနေ့ညက မြတ်သူလက်ကို ပူးချည်တဲ့ နံရံကကြိုးကို လှမ်းမြင်လိုက်သည်။
“ဟင်း.. ဟင်း.. မိကျော့… မနေ့ညက ဒီကောင့်ကို ကြိုးတုပ်ပြီး ဆွဲတာနေမှာ…”
ဒေါ်ဝေဝေက မေးလိုက်တဲ့အခါမှာ မြတ်သူက ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ပါသည်။
“အင်း… မမတို့ (၂) ယောက်လည်း ဒါကို ကြိုက်တယ်…. နင့်ကိုကြိုးတုပ်ပြီး ဒီနေ့ အခန်းတံခါးပိတ်ပြီး (၃) ယောက် ညှပ်ချရမယ်…”
ဒေါ်ဝေေ၀ အပြောကြောင့် မြတ်သူ နည်းနည်းတော့လန့်သွားသည်။ သူမတို့လို ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် တောင့်တောင့်တင်းတင်း မိန်းမ (၃) ယောက်က သူ့ကို ကြိုးတုပ်ပြီး သူမတို့စိတ်ကြိုက် တစ်နေကုန် ဆွဲတော့မှာပါ။ သူ (၃) ယောက်လုံးကို နိုင်ပါ့မလားဆိုတာတော့ မသေချာ။ ထိုအချိန်မှာဘဲ ကြက်ဥနဲ့ ငှက်ပျောသီးကို မတ်ခွက်ကြီးနဲ့ ဖျော်လာတဲ့ ဒေါ်ကျော့ကျော့က အခန်းထဲကို ဝင်လာပါသည်။ သူမ အသင့်ဆောင်လာတဲ့ တရုတ်က ကာမအားတိုးဆေးကိုလည်း ထိုထဲမှာ ရောဖျော်ထားခဲ့သည်။ သူမက မြတ်သူကို…
“ရော့… မောင်လေး သောက်လိုက်ဦး”
လို့ဆိုပြီး ခွက်ကိုပေးလိုက်ရာ မြတ်သူကလည်း ထိုခွက်ကြီးကို ကုန်အောင် သောက်လိုက်တဲ့ အခါမှာ အားပြည့်လန်းဆန်းလာသလို ခံစားလိုက်ရပါသည်။ ဒေါ်သီသီက မြတ်သူလက်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး ကြိုးနဲ့ သေသေချာချာ ပူးချည်ပြီး နံရံက သံကွင်းမှာ တွဲချည်လိုက်ပါသည်။
မြတ်သူ သောက်လိုက်တဲ့ ငှက်ပျောသီးနဲ့ ကြက်ဥဖျော်ထားတဲ့ အထဲမှာပါတဲ့ ကာမကြွဆေးကလည်း အရှိန်တက်လာတာကြောင့် မြတ်သူကား သူမတို့ သဘောရှိ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျော့ကျော့က မြတ်သူခြေထောက်ကို ကားခိုင်းပြီး ခြေကျင်းဝတ်နားမှာ ကြိုးတွေနဲ့ချည်ပြီး ကြိုးစတစ်ဖက်ကို ကုတင်တိုင်များမှာ ပြန်ဆွဲချည်လိုက်ပါသည်။ မြတ်သူကား မိန်းမ (၃) ယောက်ရဲ့ အကျဉ်းသားသဖွယ် ဖြစ်နေပြီး သူမတို့ အလိုကျ ဖြည့်ဆည်းပေးရတော့မှာပါ။
ဒေါ်ဝေဝေက မြတ်သူရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ ဒေါ်သီသီက မြတ်သူရဲ့လီးကို ကစားပြီး သူမအဖုတ်တည့်တည့်တေ့ကာ ဖိထိုင်ချလိုက်သည်။ ဒေါ်ကျော့ကျော့ကတော့ ကန့်လန့်ဖြတ် အနေအထားနဲ့ မှောက်ချပြီး မြတ်သူရဲ့ နို့သီးလေးတွေကို တစ်ဖက်က လက်နဲ့ဖိပြီး ချေပေးသလို တစ်ဖက်က စို့ပေးနေသည်။
တအင်းအင်းနဲ့ မြတ်သူ ဖီးလ်တွေ ပိုတက်လာပါသည်။ ဒေါ်ဝေဝေရဲ့ အဖုတ်လှလှလေးက သူ့မျက်နှာနားမှာ တေ့နေတာကြောင့် အမွေးနုလေးတွေ ဖုံးနေတဲ့ ဒေါ်ဝေဝေရဲ့ ညိုတိုတို စောက်ဖုတ်လေးက.. မွေးအီအီ… ညှီစို့စို့ စောက်ပတ်ရနံ့လေးတွေကို သူ့နှာခေါင်းက ရနေသည်။ ညက ဒေါ်ကျော့ကျော့က စောက်ပတ်ယက်တာ ကောင်းကောင်း သင်ပေးထားတာကြောင့် သူကျွမ်းကျင်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒေါ်ဝေဝေရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို သူ့မျက်နှာကိုမော့ပြီး လျှာကိုထုတ်လို့ အဆက်မပြတ်ကို ယက်နေပါတော့သည်။
ဒေါ်ဝေဝေကား နှုတ်ခမ်းလေးကိုကိုက်ပြီး မြတ်သူရဲ့ လျှာအစွမ်းကို ခံယူနေတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်သီသီကလည်း မြတ်သူရဲ့ လီးကို သူမအဖုတ်လေးနဲ့ ဖိထိုင်ချလိုက်ပါသည်။ မြတ်သူရဲ့ လီးက ကြီးတာကြောင့် သူမအဖုတ်ထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေတော့သည်။
ကျော့ကျော့ကလည်း မြတ်သူစိတ်တွေ ပိုမိုကြွလာအောင် မြတ်သူရဲ့ ရင်ဘတ်ကို လိုက်ယက်နေပါသည်။ မြတ်သူကလည်း ကာမစိတ်တွေ ပြင်းထန်လာတာကြောင့် ဒေါ်ဝေဝေရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို အငမ်းမရ မလွတ်တမ်းယက်ကာ လျှာကို စောက်ခေါင်းထဲထိ ထိုးထည့်ပြီး အတွင်းသားတွေကို လျှာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွေပေးနေတာကြောင့် ဒေါ်ဝေဝေ တဟင်းဟင်း တအင်းအင်းနဲ့ အရသာတွေ့နေပါသည်။
သူဌေးမိန်းမတွေမို့ သူမတို့ စောက်ပတ်ကို အကောင်းစား အမွေးနံ့သာတွေနဲ့ ဆေးကျောထားတာကြောင့် မြတ်သူအဖို့ စောက်ပတ်ယက်ပေးရတာ အရသာ ရှိနေသည်။ ဒေါ်သီသီကလည်း မြတ်သူလီးကို သူမစောက်ပတ်ထဲ စိမ်ထားပြီး ဖင်ကိုဝိုက်ဝိုက်ကာ ဖိကြိတ်ပြီး မွေပေးနေတာကြောင့် မြတ်သူမှာ လရေမထွက်အောင် မနည်းထိန်းနေရသည်။ သူမတို့ ပုံစံကြည့်ရတာ.. သူ့ကို ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး လိုးခိုင်းမဲ့ပုံစံ ဖြစ်နေတာကြောင့် သူခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ လိုတယ်လို့တွေးပြီး လရေမထွက်အောင် ထိန်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပြွတ်ပြွတ်… ပလပ်… ပြတ်ပြတ်…”
မြတ်သူ စောက်ပတ် ယက်ပေးတာက အရမ်းကောင်းတာကြောင့် ဒေါ်ဝေဝေလည်း စောက်ခေါင်းထဲက စောက်ရည်ဖြူဖြူ ချွဲချွဲတွေ ထွက်ကျလာပါသည်။ စောက်ရည်တွေက မြတ်သူ မျက်နှာပေါ်ကို ကျကုန်သလို မြတ်သူကလည်း အဆိုပါ စောက်ရည်တွေကို ပြောင်နေအောင် လိုက်ယက်လိုက်ပါသည်။ ထိုအချိန်မှာ မြတ်သူလီးကို အဖုတ်ထဲထည့်ပြီး မွေနေတဲ့ ဒေါ်သီသီကလည်း ဖင်ကြီးရှုံ့သွားပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲက အရည်တွေ ထွက်ကျလာပါသည်။
သူမတို့က လူချိန်းလိုက်ကြပြီး… ဒေါ်ကျော့ကျော့က မြတ်သူလီးကို ခွထိုင်လို့.. ဒေါ်သီသီရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို မြတ်သူက လျှာနဲ့ ခုနကပုံစံအတိုင်း ယက်ပေးရပါသည်။
ဒေါ်ဝေဝေက သူ့နို့သီးလေးတွေကို သူမလက်တွေနဲ့ ဆွဲလိမ်နေတာကြောင့် မြတ်သူ နာကျင်သွားပြီး နာကျင်မှုကြောင့် ပိုမိုစိတ်ကြွလာပါသည်။ ဒါကြောင့် သူ့မျက်နှာပေါ်က ဒေါ်သီသီရဲ့ စောက်စိကို ပါ နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖိညှပ်ပြီး ချိုချဉ်စုပ်သလို စုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဒေါ်သီသီရဲ့ ဖင်ပေါက်လေးကိုပါမကျန် လိုက်ယက်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့….
“ပြွတ်ပြွတ်… အိုး… အိုး… ဟဟ…”
ဒေါ်သီသီရဲ့ ဖင်ကြီးတစ်ခုလုံး တုန်ခါသွားပြီး အရူးအမူးကို ဖြစ်သွားပါသည်။
“မောင်လေး… ဆက်စုပ်.. ဆက်စုပ်… မမအရမ်းကောင်းနေပြီ.. အင်းဟင်း”
ဒေါ်သီသီရဲ့ တောင်းဆိုသံလေးတွေ ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုအချိန်မှာ သူ့လီးကို အဖုတ်ထဲ ဖိဖိဆောင့်ဆောင့်နေတဲ့ ဒေါ်ကျော့ကျော့ကလည်း
“မောင်လေး… ထိန်းထား… မမထွက်တော့မယ်… ဖွတ်… ဘွတ်… ဘွတ်… ရှီး… ရှီး… ပလွတ်… ပလွတ်… ဘုတ်… ဘုတ်… အ… အ… အ… အ… မောင်လေး…. အင်း… ဟင်း”
ဒေါ်ကျော့ကျော့ မျက်နှာလေးရှုံ့သွားကာ အသားကုန် အော်ဟစ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ မြတ်သူလီးထိပ်က လရေတွေက ဒေါ်ကျော့ကျော့ စောက်ခေါင်းအတွင်းနံရံတွေကို ပန်းထွက်ကာ ဖျန်းပက်နေသလို… ဒေါ်ကျော့ကျော့ စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေကလည်း မြတ်သူလီးကြီးကို ညှစ်ညှစ်ပြီး ဆွဲစုပ်ကာ စောက်ရည်တွေ တပျစ်ပျစ် ထွက်ကျလာပါတော့သာ်။
မြတ်သူကား ဒေါ်သီသီရဲ့ စောက်ပတ်ကိုသာမက ဖင်ပေါက်လေးကိုပါ လိုက်ယက်တာကြောင့် ဒေါ်သီသီလည်း အကောင်းကြီးကောင်းပြီး…
လည်တိုင် ကျော့ကျော့လေးကို မော့ကာ… အသားကုန် အော်ဟစ်ပြီး စောက်ရေတွေကို မြတ်သူပါးစပ်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့သည်။
ထိုနေ့တစ်နေ့လုံး မြတ်သူကတော့ မမ (၃) ယောက်ရဲ့ အချစ်အကျဉ်းသား ဖြစ်ကာ သူ့ကို ကြိုးတုပ်ထားပြီး စိတ်ကြိုက် တစ်လှည့်စီ ဆွဲတာကို ခံလိုက်ရပါတော့သည်။
ကုမ္ပဏီပိတ်ရက် တစ်ရက်တွင် ဖြစ်သည်။ မြတ်သူကား အပြင်ထွက်ရန် အခန်းတံခါးကို ပိတ်လိုက်သည်။
အခန်းဘေးမှ သူ့အခန်းနားနီးချင်း ကိုအောင်။
“ဒါနဲ့ညီလေး ကုမ္ပဏီမှာ ရာထူးတိုးသွားပြီဆို”
“ဟုတ်တယ်အစ်ကို… မနက်ဖြန်ကျရင် အစ်ကိုနဲ့ ကျွန်တော် ဘီယာဆိုင်သွားကြဦးစို့လေ။ ကျွန်တော် ပြုစုချင်လို့….”
“ဟား… ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ ကဲကဲ… သွားစရာရှိရင် သွားလိုက်ဦး”
မြတ်သူကား ခပ်သွက်သွက်လေး ထွက်လာခဲ့သည်။ ချိန်းထားတဲ့သူတွေ ရှိသည်။ တကယ်တော့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေးကတော် ဒေါ်ကျော့ကျော့၏ ကောင်းမှုကြောင့် ရာထူးတွေ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် တက်ခဲ့သည်။ သူ့အနေဖြင့် အစောကြီး အိပ်နေရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒေါ်ကျော့ကျော့နှင့် သူမသူငယ်ချင်း ဒေါ်သီသီ၊ ဒေါ်ဝေေ၀တို့၏ လင်ငယ် ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူမတို့က အားတဲ့သူအိမ်မှာ သူ့ကိုချိန်းကာ (၃) ယောက်တစ်ယောက် လိုးခိုင်းနေတာကြောင့်ပင်။
ကိုအောင်ကတော့ မြတ်သူ တော်တော်ကံကောင်းတာဘဲဟု တွေးမိသည်။ မြတ်သူ၏ ဘဝကို မသိသဖြင့် သူ့လိုအနေအထား မဟုတ်ဟု ထင်မိသည်။ တကယ်တော့ မြတ်သူကား သူ့ဘဝထက် ဆိုးနေတာ သူမသိ။ ကိုအောင်တစ်ယောက် အခန်းထဲမှာ တွေးကာ အတွေးနယ်ချဲ့နေချိန်… မြတ်သူတစ်ယောက်ကတော့ လမ်းထိပ်မှာ အသင့်စောင့်နေသည့် ဒေါ်ဝေဝေ၏ ကားပေါ်တွင် ပါသွားပြီး သူမယောင်္ကျား မသိအောင် ဝယ်ထားသည့် ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်က အိမ်မှာ အသင့်စောင့်နေသော ဒေါ်ကျော့ကျော့၊ ဒေါ်သီသီတို့ထံ ခေါ်ဆောင်သွားတော့သည်။
ထိုအိမ်က ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ မြတ်သူကို ခြေလက်တွေကို ကုတင်တိုင်တွေမှာ ကြိုးနဲ့ တင်းတင်းမလှုပ်နိုင်အောင် ပူးချည်ပြီး တစ်နေကုန် လိုးခိုင်း၊ စောက်ပတ်ယက်ခိုင်းကြတော့မှာ ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်နာရီခန့် အကြာမှာတော့ မြတ်သူကား ထိုတိုက်ခန်းထဲက ကုတင်မှာ ခြေလက်တွေကို ကြိုးတုပ်ခံရပြီး သူဌေးမိန်းမ (၃) ဦး၏ လင်ငယ် အကျဉ်းသားဘဝဖြင့် သူမတို့၏ ကာမဆန္ဒများကို အလိုကျ ဖြည့်ဆည်းပေးနေရပြီး နွံနစ်နေတာကို ကိုအောင်တစ်ယောက် သိခွင့်ရမည် ဆိုလို့ကတော့။ သူ့ဘဝကမှ တော်သေးသည်ဟု ထင်မိမှာ အမှန်ပင်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 21,346
ယောက်ျားမိန်းမ မဟူတည်း →